downloads 18 727
Ebe a bụ B52, ama n'agbanyeghị nke onwe ya, n'ụzọ dị mwute! Ọtụtụ ụzọ na nsụgharị. A maghị. Flight nlereanya nke ọma mere. The ụda e gbaziri Roger.
The Boeing B-52 Stratofortress emeri na otu bombu bụ a subsonic ogologo nso, kwadoro site ugboelu engines, mepụtara site Boeing Boeing. Ọ bụ na ọrụ na United States Air Force (USAF) ebe ọ bụ na 1955. Project B-52, a nri-nku ugbo elu-kwadoro site na isii turboprop,-enweta nkwanye nkwekọrịta ga-aka na 15 June 1946 na-aghọ prototype YB-52, kpochapụ-nku ugbo elu onwem na asatọ turbojet engines. The ugbo elu mere ya mbụ ụgbọ elu on 15 April 1952, na Tex Johnston dị ka ule pilot.
The B-52 Stratofortress nke nta nke nta dochie Convair B-36 n'etiti 1955 na 1959. Ọ bụ ezie na wuru na-ebu ngwá agha nuklia na deterrence ọzọ nke Agha Nzuzo, ya mee ka a tọhapụ ot mgbọ n'oge nile a lụrụ na nke ọ abuana. Ike ibu ruo 32 tọn ngwá agha na ekele ya nnukwu iche, ọ ka na-emezu ihe ndị arụmọrụ mkpa nke ndị USAF.
The B-52 bụ na ọrụ ke akpa Strategic Air Command, na mgbe mgbasa ya na 1992, ọ banyere òfùfè nke Air ọgụ Command. Na 2010, o sonyeere n'otu oge dị ka Northrop B-2 Mmụọ, ndị ọhụrụ kere Global Ebu Command. Ekele ya magburu onwe arụmọrụ na elu subsonic gbapụrụ ọsọ na ọrụ na-akwụ ụgwọ dịtụ ala, ndị B-52 ka na-eji, n'agbanyeghị iwebata ihe n'oge a ugbo elu bu n'obi iji dochie, dị ka North American XB-70 Valkyrie ibuo, Rockwell B- 1 Lancer supersonic Northrop B-2 Mmụọ stealth.
Na January 2005, ndị B-52 ghọrọ nke abụọ ugbo elu, mgbe English Electric Canberra otu bombu British, mgbe 50 afọ nke na-aga n'ihu ọrụ ya mbụ ọrụ. Na 2009, e nwere ebe anọ ọzọ ugbo elu na nke a: na Soviet Tupolev Tu-95 na US Lockheed C-130 Hercules, Boeing KC-135 Stratotanker na Lockheed Na-2 (isi Wikipedia)
Onye edemede: inconnu